Turkey oo Tababar usoo xirey Ciidamo katirsan Komandoosta Somalia. – Geelle Magazine
Turkey oo Tababar usoo xirey Ciidamo katirsan Komandoosta Somalia.
Sii-hayaha wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya,Taliya ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa Ku dhawaad 300 (Saddex boqol) oo askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Ciidankaan oo muddo tababar ku qaadanayay dalka Turkiga ayaa saaka dib ugu soo laabtay caasimadda.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Janaraal, Odowaa Yuusuf Raage oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta ayaa sheegay in ciidankaan ay qeyb ka qaadan doonaan la dagaalanka cadowga baneystay dhiiga shacabka.
Sii-hayaha wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed (Amar dambe) ayaa ciidanka ku dhiirigeliyay in ay aqoontooda uga faa’iideeyaan si dalka looga xureeyo maleeshiyada Al-shabaab, wuxuuna dowladda Turkiga uu uga mahadceliyay taageerada dhanka tababarka ah ee ay siiso ciidanka Qaranka.
Dowladda Soomaaliya oo taageero ka heleysa dhiggeeda Turkiga ayaa waddo dadaallo dib loogu soo celinayo awooddii ciidanka xoogga, si dalka looga cirib tiro maleeshiyada argagaxisada ah ee Al-shabaab.
DEG DEG: Xildhibaanada labada Aqal oo Ansixiyay Heshiiskii Doorashada Dalka.